Semalt: 10 Izici Absolutely Awesome Of FMiner, Ithuluzi Enamandla Web Scraping Ithuluzi
I-FMiner iyithuluzi elinamandla nelusizo lokukhipha amawebusayithi, ukukhwabanisa kwewebhu noma ukukhomba, ukuskrini kwesikrini nokusekelwa kwe-macro kubasebenzisi be-Mac OS X nabasebenzisi be-Windows. Lolu hlelo olulula ukusebenzisa uhlelo luhlanganisa izici ze-class class kanye ne-design enembile.
Kungakhathaliseki ukuthi kufanele ubhale amakhasi amaningi wewebhu noma kufanele wenze uhlelo oluyinkimbinkimbi yokukhipha idatha oludinga uhlu lwamaseva we-proxy kanye ne-Ajax handline, i-FMiner yiyona ndlela efanele! Ngalolu hlelo, ungakwazi kalula ukulawula amaminithi elula okulula futhi okunzima okumbumbuluwe kwedatha kanye namasu okukhwabanisa iwebhu futhi ungavuna idatha kusuka kumasayithi amaningi, njengeziza ezihlukanisiwe zendawo yokuhlala, izinjini zokusesha, amakhasi aphuzi, izinkomba, izinkundla zamakhompiyutha kanye nezinhlu zomkhiqizo.
Uma wenza iphrojekthi efuna ukubuyekezwa okuvamile futhi okusheshayo, imodemu yokuhlela i-FMiner ehlanganisiwe izokuvumela ukuthi uhlele isimiso sesikhathi. Ezinye zezici zayo ezivelele zichazwe ngezansi - nokian tire reviews.
1. I-Visual Editor Option
Ungayilalisa amaphrojekthi okukhishwa kwedatha usebenzisa inketho yomhleli wayo wokubona futhi uthole idatha oyifunayo kumaminithi angaphansi kwengu-10.
2. Ayikho ikhodi edingekayo
Isibonisi sayo esilula, esisebenzisekayo futhi esisebenzelanayo sikwenza kube lula kuwe ukurekhoda amaphrojekthi akhishwe ngaphandle kwesidingo samakhodi.
3. Izici ezithuthukisiwe
4. Okukhethwa kukho kokuhamba nge-Crawl Path Indlela yokuzula:
I-FMiner ikusiza ukuthi uphume ngamakhasi wewebhu bese uhlanganisa izakhiwo ezinkulu zokuxhumanisa, ukukhetha okudonsa phansi, iphethini ye-URL kanye nokufaka okufakwayo okufakwayo okuzenzakalelayo.
5. Uhlu lokufaka igama elingukhiye:
Esinye sezici ezinhle kakhulu ze-FMiner yilokho ongalayisha kalula amanani wokufaka
6. Izinketho zeDatha eziNziwe:
I-FMiner iyaziwa kahle kakhulu. okukhethwa kukho okukhethwa kukho okuhlanganisiwe okwenziwe nge-multilevel.Ingakwazi ukususa kalula izakhiwo zokuxhumanisa bese ithatha izinhlu zomkhiqizo ezakhiweyo. Ngaphezu kwalokho, kuthuthukisa imiphumela yokusesha injini yesayithi lakho futhi ithumela idatha yakho kumarekhodi amakhulu.
7. Amaningi I-Crawl efundwayo:
Ungakwazi ukusheshisa isikhala sedatha ngekhono lokukhwela iziphequluli eziningi ze-FMiner. Leli thuluzi lizokwenza kube lula kuwe ukuba ubhale amakhasi akho ku-Google, Bing, ne-Yahoo.
Amafomu okuthumela ngaphandle:
Umfelandawonye usekela inombolo enkulu yamafomethi okuthumela ngaphandle njenge-Excel, CSV, HTML, XML, ne-JSON. Futhi igcina idatha yakho kulwazi njenge-MySQL, i-MS SQL, ne-Oracle.
9. Ukuhlolwa kwe-Captcha:
Qiniseka ngokuvikelwa kwakho kwe-inthanethi ngokuhlolwa kwe-FMiner's Captcha. Lokhu kuzokuvimbela i-bots nezikhawu ukungena kusayithi lakho futhi kuyinkampani ephelele yenkampani yangaphandle ye-captcha yesevisi.
10. Ummeleli kanye namakhukhi wokufinyelela okungaziwa:
Enye yezici ezinhle kakhulu ze-FMiner ukuthi isekela ama-proxies ahlukene nama-cookies ukuthola ukufinyelela okungaziwa. Kusho ukuthi yonke into oyithathayo kwi-intanethi ayitholi irekhodi futhi ikheli lakho le-IP lifihliwe.
Kumele ukhethe ifomethi yefayili yokukhipha bese uvumela i-FMiner ukwenza umsebenzi wayo. Izokukhipha idatha, futhi ungakwazi ukuqapha zonke izinyathelo ezenziwe ngethuluzi. Umklamo ophezulu kakhulu wokubonwa kombukiso we-FMiner uzothatha zonke izinyathelo futhi ufanise imephu yenqubo ekwazi ukusebenzisana namakhasi ewebhu ahlosiwe. Ngaphezu kwalokho, izokunikeza izithombe-skrini ukuze ukwazi ukuqapha ikhwalithi yedatha yakho. Idatha ye-FMiner igcinwa kumafomu e-Excel, i-SQL noma ama-CSV futhi ihanjiswe kumininingwane.